Khilaafka dastuuri ah ee u dhaxeeyey Puntland & dawladda Somaliya oo sii xoogaystay. – Radio Daljir
Khilaafka dastuuri ah ee u dhaxeeyey Puntland & dawladda Somaliya oo sii xoogaystay.
Muqdisho, Sept 16 – Waxaa soo ifbaxaya muran xooggan oo u dhaxeeyey dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland, kaasi oo salka ku haya is-maandhaaf xaggaa sharaciga ah.
Khilaafkaan oo hadda soo ifbaxay ayaa ka danbeeyey kadib markii dhawaan dalka jamhuuriyadda Jabuuti lagu kala saxiixday heshiis ku saabsan la dagaallanka burcad badeedda, kaasi oo ay ka qayb ahaayeen 8 dawladood oo ah kuwa kulaala xeebaha geeska afrika, waxaana si weyn u saluugay heshiikaasi dawladda Puntland oo u cuskatay in uu jabinayo heshiis ay horay u wada galeen dawladda Soomaaliya.
Dawladda KMG ah ee Soomaaliya shirkaasi waxaa uga qayb-galayey wafti heer xukuumadeed ah, oo uu hoggaaminayey wasiirka kalluumaysiga Prof. C/raxmaan Xaaji Ibbi, kaasi oo qalinka ku duugay heshiiskaan oo dhigaya in xarun ciidan la dagaallama burcadda laga furo Jabbuuti.
Dawladda Puntland ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah isla markaana ka hor imaanaya heshiis kale oo dhawaan ay Galkacyo ku wada gaareen wafti oo horkacyey R/wasaare Cumar C/rashiid Sharmaarke, iyo dawladda Puntland, kaasi oo qodobo ka mid ahi ay caddaynayeen Puntland in ay ka qayb-gasho shirkasta oo looga hadlayo arrimaha quseeya sida burcadda, iyo in xarunta ciidanka la dagaallanka burcad badeedda laga furo Puntland.
Labadaan heshiis ee dawladda Soomaaliya ay u kala saxiixeen R/wasaare Sharmaarke, iyo wasiirka kalluumaysigaa Prof Ibbi ee wada quseeya arrimaha burcad badeedda, ayaa iska hor imaanaya, taas oo muujinaysa in uu jiro mugdi iyo is-faham la?aan ku kala dhax jirta xumuumadda R/wasaare Sharmaarke inta aan la gaarin diidmada Puntaland ee heshiiskaasi Jabuuti.
Dhawaan dawladda Soomaaliya iyo midda Puntland, waxay si wada jir ah ugu dhawaaqeen in ay soo afjareen khilaafkii u dhaxeeyey oo markii horaba ka kacay is maan-dhaaf xagga sharciyadda ah, waxaana is afgarad-kooda ay sheegeen kadib markii ay soo wada saareen heshiis ay ku midoobeen iskasta oo hadda heshiiskaasi muran ka soo laabtay.
Puntland waxay qabtaa dawladda federaalku in ay ka baxday dhammaan arrimihii ay ku heshiiyeen ee ka hadlayey burcad badeedda iyo sida loola tacaalayo, mana cadda halka ay arrimuhu ku danbayn-doonaa, laakiin waxaa shaki ku jirin tani in ay sii kala fogaynayso Puntland iyo dawladda Soomaaliya.